बुलबुल निर्मातालाई सात प्रश्न ! – Tandav News
बुलबुल निर्मातालाई सात प्रश्न !
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ फाल्गुन १ गते बुधबार १४:२२ मा प्रकाशित 39
टेम्पो चालकको भुमिकामा देखिएकी स्वस्तीमा खड्का र मुकुन भुसालको अभिनय रहेको फिल्म बुलबुल यहि शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । गित, टिजर र ट्रेलर रुचाएका दर्शकहरु प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे बुलबुलसँगै मनाउन आउलान् भन्ने अपेक्षा निर्माण युनिटले लिएको छ । रिलिज डेट नजिकिदैँ गर्दा निर्माता अविरल थापालाई हामीले फिल्मबारे सात वटा प्रश्न सोधेका छौँ ।
१‍. बुलबुल चलचित्र किन हेर्ने ?
बुलबुल किन हेर्ने भन्दा पनि किन नहेर्ने भन्नु त ! अहिलेसम्म हाम्रो चलचित्रको गीतहरु, टे«लर ,टिजर र अन्य प्रचार सामग्री हेरिसक्दा दर्शकहरुले मौलिकपन र चलचित्र कुन स्तरमा बनेको छ भन्ने कुरा थाहा पाईसक्नु र हजारौं दर्शकहरु बुलबुल हेर्न व्याकुल भएर बस्नुभएको छ भन्ने लाग्छ ।
२. भ्यालेन्टाइन डे मा नै रिजिल गर्नुपर्ने कारण के हो ?
हाम्रो चलचित्र गजबको प्रेमकथा भएको चलचित्र हो । यो मौसम पनि प्रेमिल हुने र प्रेमी मनभएका दर्शकहरु मनोरञ्जनको मुडमा पनि हुन्छन् । आफ्नो मनले खोजेको कुरा आफूले व्यक्त गर्न नसकेको कुरा आफूले मनपराउने व्यक्तिसँग हेर्ने हो भने धेरैले प्रेम भनेको के रैछ भन्ने पनि बुझ्छन् भन्ने लाग्छ । प्रेमको मूल्य र गहिराई बुझ्न जोकसैले छुटाउनै नहुने चलचित्र हो बुलबुल । भ्यालेन्टाईन उचित अवसर र मौका हो ।
३. पछिल्लो समय आशालाग्दा फिल्मले पनि दर्शक पाएको देखिदैन् । यसबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ?
यो चलचित्र हेर्न हलहरुमा दर्शकको ओईरो लाग्नेछ । यस्तो चलचित्र आजसम्म नेपाली दर्शकले हेर्नै पाएका छैनन् । हेर्दिन हेर्दिन भनेपनि हेरेर आएका साथीभाइ र आफन्तले यो चलचित्रका पात्र ,संवाद ,गीत र दृश्यका बारेमा यति कुरा गर्नेछन् कि जो कोही पनि हलसम्म नगई धरै पाउँदैन । गएर हेर न हेर भनेर एकले अर्कालाई झकझकाई रहनेछन् । जसले छुटाउँछन उनीहरुलाई किन हेरेनछु भनेर थकथकी लाग्नेछ । यो
फिल्म कम्तीमा दुई वर्ष हामी युट्युवमा हाल्नेछैनौं । आजसम्म दर्शकहरु चलचित्र हेरेर मुखदेखि,घाँटीदेखि,पेट हल्लाएर हाँसे होलान् बुलबुल हेरेर नाभी हल्लाएर हाँस्नेछन् । त्यसका साथै यसले दर्शकको मन हुँडल्नेछ भने दिमाग पनि रन्थनाउनेछ ।
४. चलचित्रमा समावेश गीत सबैले रुचाएका छन् । कतै गीत दर्शकका लागि देखाउने दाँत मात्र त हुँदैन ?
हामीले अहिलेसम्म देखाएको त केही पनि हैन । देखाउन र हेर्न बाँकी त के के छन् छन् । यति कुरा म विश्वस्त पार्न चाहन्छु कि हामी चलचित्र हेरुन्जेल कुनै पनि पल तपाईलाई दायाँबायाँ सोच्ने र वहकिने मौका दिनेछैनौं ।
दर्शकहरु यसरी बाँधिनेछन् र अब के होला अब के होला भनेर अन्तिमसम्मै कौतुहलतापूर्वक बस्नेछन् । बल्ल गर्व गर्नलायक नेपाली चलचित्र हेर्न पायौं भनेर दर्शकहरु खुशी भएर हलबाट निस्कनेछन् । बुलबुल आज हेर्यो भोलि बिर्सने आयाराम गयाराम खाले बजारु चलचित्र हैन । एकफेर जसले हेर्यो उसले दोहोर्याएर हेर्ला बरु तर जुनीभरि बुलबुललाई बिर्सनसक्ने छैन ।
५. चलचित्रमा समावेश संवाद अश्लिल भयो भन्दै चलचित्र विकास बोर्डले हटाउने भन्दै पत्र काटेको थियो । तपाइले पनि फिल्ममा अश्लिलता विकाउन खोज्नुभएको हो ?
हामीलाई अश्लिलता के हो र कला के हो भन्ने गहिरो ज्ञान छ । हामी जिम्मेवार मानिसहरु छौं किनकी यो चलचित्रका निर्देशक विनोद पौडेल स्वयं नेपालको एकमात्र चलचित्रको पढाई हुने कलेजका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ भने म आफू स्वयं पत्रकारिता पढाउने कलेजको प्रिन्सिपलनै छु र सञ्चारकर्ममा झन्डै दुई दशकदेखि छु र त्यति घटिया स्तरमा त हामीले कुनै काम र बेच्नको लागि त्यस्तो हतकण्डा अपनाउने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं ।
चलचित्रको सेटिङ कुन परिवेशमा छ समाजको कुन तप्का र सेरोफेरोमा रहेर चलचित्रको निर्माण गरिएको छ भन्ने नबुझि र त्यस्ता संवादहरु समाजमा बोलिन्छन् कि बोलिन्छन् भन्ने लामो अनुसन्धान गरेरै समावेश गरिएको हो ।
यहाँ कसैले पनि दोहोरो चरित्र र पाखण्डपन नदेखाए राम्रो हुने थियो । अहिले त सेन्सर बोर्डले चलचित्र हेरेर हामीलाई प्रमाणपत्र पनि दिइसकिएको छ र सेन्सरका पदाधिकारीहरुले पनि चलचित्र हेरिसकेपछि गजवको मौलिक चलचित्र हेर्न पाईयो भनेर खुशी हुनुभयो ।
६. नयाँ नायक भित्राएर रिक्स मोल्नु भएको छ । व्यापारमा असर त पर्दैन ?
हेर्दै जानुहोला यिनै नयाँ अभिनेताले नेपाली चलचित्र उद्योगमा फिल्म हलमा लागेको दिनदेखि तरंग ल्याउनेछन् । चोपेन्द्र पात्रको रुपमा उनी चलचित्र नलाग्दै परिचित भईसकेका छन् ।
बुलबुल चलचित्र मार्फत नेपाली चलचित्र उद्योगले एक होनहार र सशक्त अभिनेता मुकुन भुषाल उपहारको रुपमा पाउँदैछ । बुलबुलको व्यापार यदि बढ्छ भने यीनै नयाँ अभिनेतालाई हेर्न दर्शक ओईरिएनै बढ्छ किनकी यिनी बिलकुल नौला छन् र धेरैलाई यिनको काम हेर्नै हुटहुटी जागिसकेको छ । यिनै चोपेन्द्रले अपारको व्यापार गराउनेछन् ।
७. फिल्मको प्रचारमा नयाँ प्रयोग गर्नुभएको छ । लुट जस्तै यो फिल्मले पनि नेपाली चलचित्रको धार परिवर्तन गर्ला ?
हामी अरुजस्तै भीडमा मिसिएर हराउन आएका हैनौं । हामी पृष्ठभुमिमा कैयन वर्षदेखि काम गरेपनि यो क्षेत्रमा नौला हौं त्यसैले हामीलाई आफनो बेग्लै छाप र पहिचान दर्ता गराउनुपनि थियो । हामीले जसरी नयाँ तवरको चलचित्र बनाएका छौं त्यसलाई दर्शकसम्म पु¥याउन र दर्शकको ध्यानाकर्षण गर्न पनि नयाँ प्रचारशैलीको प्रयोग गर्न एकदम जरुरी थियो ।
हामी प्राज्ञिक पृष्ठभुमिबाट आएको हुँदा हामीलाई हाम्रो ज्ञान र अध्ययनको प्राक्टिकल गर्नु पनि थियो जुन हामीले गर्यौ र सफल पनि भयौं । हाम्रो नौलो र मौलिक प्रचारशैलीका कारणले नै हामीलाई दर्शकहरुले बेग्लै दृष्टिकोण र आशापुर्वक हेरिरहनुभएको छ ।
यो चलचित्र निरञ्जन निराकार छ यसले सबै कायापलट गर्छ त म भन्दिन । तर यो चलचित्रले धेरै कुरा दिएर जान्छ । नेपाली चलचित्रको इतिहासमा गर्विलो र मौलिक चलचित्रको रुपमा दर्ता भएर बस्नेछ भन्ने विश्वास पालेको छु ।
मैले आफैले धेरै कुरा भन्ने भन्दा पनि अब यसले के गर्नेछ र के गर्नेछैन भन्ने फैसला आम दर्शकलेनै गरुन भन्ने चाहन्छु । फागुन ३ गतेबाट नजिकको सिनेमाहलमा पुगेर मैले बोलेका कुराहरुको मुल्याँकन गरिदिन र स्वस्थरुपमा यो चलचित्रको समालोचना गरिदिन सबैलाई अनुरोध पनि गर्दछु ।